Iindaba - UmGaqo wokuSebenza wokuPolisha umngundo kunye neNkqubo yawo.
Ukusebenza Umgaqo Of Ikubumbe wokucoca kunye neNkqubo yayo.
Kwinkqubo yokuvelisa sokubumba, isahlulo ukuyila ukungunda kudla kufuneka umphezulu olukhazimlisiweyo. Ukulawula ubuchwepheshe bokucoca kunokuphucula umgangatho kunye nobomi benkonzo yokubumba kwaye ngaloo ndlela kuphuculwe umgangatho wemveliso. Eli nqaku liza kwazisa ukusebenza kunye nenkqubo yokubumba wokucoca.
1.Umatshini wokucoca indlela kunye nomgaqo wokusebenza
Ukupholisha umngundo kuhlala kusetyenziswa imitya yelitye leoyile, iivili zoboya, isandpaper, njl, ukuze umphezulu wezinto ukhubazeke ngeplastikhi kwaye isahlulo se-convex somphezulu womsebenzi ususwe ukufumana umphezulu ogudileyo, owenziwa ngokubanzi ngesandla . Indlela yokugaya nokucoceka okuhle kakhulu iyafuneka kumgangatho ophezulu womgangatho. Ukugaya nokucoceka okuhle kakhulu kwenziwa ngesixhobo esikhethekileyo sokusila. Kulwelo lokucoca oluqulathe esirhabaxa, lucinezelwe ngokuchasene nomphezulu womatshini ukwenza isantya esiphakamileyo sokujikeleza. Ipolishi inokufikelela kuburhabaxa bomhlaba beRa0.008μm.
2. Inkqubo wokucoca
(1) polish erhabaxa
Ukulungiswa kakuhle, i-EDM, ukugaya, njl njl. Kungaconjululwa ngombala ojikelezayo ojikelezayo ngesantya sokujikeleza sama-35 000 ukuya kuma-40 000 r / min. Ke kukho ilitye leoyile lokusila lesandla, isiqwenga selitye leoyile kunye neparafini njengesithambisi. Umyalelo wokusetyenziswa ngu-180 # → 240 # → 320 # → 400 # → 600 # → 800 # → 1 000 #.
(2) ipolishi semi-ocoliweyo
Ukugqitywa kokugqibezela kusetyenziswa isandpaper kunye neparafini. Inani le-sandpaper lilungile:
400 # → 600 # → 800 # → 1000 # → 1200 # → 1500 #. Ngapha koko, # 1500 sandpaper isebenzisa isinyithi sokubumba esilungele ukuqina (ngaphezulu kwe-52HRC), kwaye ayisiyilungelanga isinyithi esenziwe pre-lukhuni, kuba inokubangela ukonakala kumphezulu wentsimbi yangaphambi kokuqina kwaye ayinakho ukufikelela kwisiphumo sokucoca.
(3) wokucoca Fine
Wokucoca Fine ikakhulu usebenzisa unama diamond esirhabaxa. Ukuba usila ngevili yelaphu lokucoca ukuxuba umgubo wedayimani okanye irabha esirhabaxa, i-odolo yesiqhelo yokugaya ngu-9 μm (1 800 #) → 6 μm (3 000 #) → 3 μm (8 000 #). I-9 μm yokunamathisela idayimane kunye nevili lokucoca ilaphu linokusetyenziselwa ukususa amanqaku eenwele kwi-1 200 # kunye ne-1 50 0 # yesandpaper. Ukucoca emva koko kwenziwa ngokuziva kunye nokuncanyathiswa kwedayimani ngokulandelelana kwe-1 μm (14 000 #) → 1/2 μm (60 000 #) → 1/4 μm (100 000 #).
(4) Indawo yokusebenza ecoliweyo
Inkqubo ipolishi kufuneka yenziwa ngokwahlukeneyo kwiindawo ezimbini zokusebenza, oko kukuthi, indawo yokugaya erhabaxa kunye nendawo entle yokulungisa indawo yahlulwe, kwaye kufuneka kuthathelwe ingqalelo ukucoca amasuntswana esanti aseleyo kumphezulu womsebenzi ngaphambili inkqubo.
Ngokubanzi, emva kokucoca kurhabaxa ngelitye leoyile ukuya kwi-1200 # sandpaper, indawo yokusebenza kufuneka icocwe ngaphandle kokucoca uthuli, iqinisekisa ukuba akukho masuntswana othuli emoyeni ahambelana nomphezulu wokubumba. Ukuchaneka kweemfuno ezingaphezulu kwe-1 μm (kubandakanya i-1 μm) kunokwenziwa kwigumbi lokucoca elicocekileyo. Ukucacisa ngokuchanekileyo ngakumbi, kufuneka ibekwindawo ecoceke ngokupheleleyo, kuba uthuli, umsi, inkwethu kunye namathontsi amanzi anokukrola umphezulu opolishwe ngokuchanekileyo.
Emva kokuba inkqubo ipolishi igqityiwe, umphezulu womsebenzi kufuneka ukhuselwe eluthulini. Xa inkqubo yokumisa iphelisiwe, zonke izinto ezirhabaxa kunye nezinto zokuthambisa kufuneka zisuswe ngononophelo ukuqinisekisa ukuba umphezulu womsebenzi ucocekile, emva koko umaleko wokubumba wokulwa nerusi kufuneka uchithelwe kumphezulu womsebenzi.
Ixesha Post: Jan-10-2021